၂၀၁၄ သန်းခေါင်စာရင်းကောက်ယူရာ တွင် ရိုဟင်ဂျာ မ ပါ ဆိုသော လ၀က ၀န်ကြီး ဦးခင်ရီ ၏ဖြေ ကြား ချက် ကို ပြန် လည် ရှင်း လင်း တင် ပြ ခြင်း …. | Danya Wadi
»သတင်းများ»၂၀၁၄ သန်းခေါင်စာရင်းကောက်ယူရာ တွင် ရိုဟင်ဂျာ မ ပါ ဆိုသော လ၀က ၀န်ကြီး ဦးခင်ရီ ၏ဖြေ ကြား ချက် ကို ပြန် လည် ရှင်း လင်း တင် ပြ ခြင်း ….
၂၀၁၄ သန်းခေါင်စာရင်းကောက်ယူရာ တွင် ရိုဟင်ဂျာ မ ပါ ဆိုသော လ၀က ၀န်ကြီး ဦးခင်ရီ ၏ဖြေ ကြား ချက် ကို ပြန် လည် ရှင်း လင်း တင် ပြ ခြင်း ….
Posted by danyawadi on July 31, 2012 in သတင်းများ, ဆောင်းပါးများ
လွှတ်တော်မှာ နိုင်ငံသားဥပဒေကိုပြင်ဆင်ပြဌာန်းရန်အဆိုကိုအတည်ပြုထားပြီးဖြစ်သော်လည်း၎င်းဥပဒေအရ ရိုဟင်၈ျာ လူမျိုး ပါနိုင် ကြိုတင်ပြော ၍ မ ရနိုင် ပါ။သို့သော်လည်းလဝက ဝန်ကြီးကြေ့ာဆိုချက်မှာ ဥပဒေဘောင်မဝင်ပါကြောင်း လွတ်တော်အသီးသီးသို့ စာတမ်းများ လည်း တင်ပြ ထား ပြီးဖြစ်ပါကြောင်း၊ထိုစာတမ်းများကို သန်းခေါင်စာရင်းမကောက်မီ နိုင်ငံသားဥပဒေပြဌာန်းပြီးမှ လွှတ်တော်၏ဆုံးဖြတ်ချက် ဆုံးဖြတ်ချက် အပြောဆို ရမည်ဖြစ်ကြောင်းပြန်လည်ရှင်းလင်းတင်ပြပါသည်။
ရခိုင်ပြည်နိုင်ငံရေး သမိုင်းနှင့် အနာဂတ် ရခိုင်ပြည်
မြန်မာသမိုင်းတွင် ရိုဟင်ဂျာ များသည် တိုင်းရင်းသားလူမျိုးစုအဖြစ်ရပတည်ခဲ့
အိမ်နီးချင်း နိုင်ငံ နယ်နမိတ် အတွင်းကျသည့် နယ်ပယ်ပ…
ရခိုင်ပြည်နယ်၊ ပြည်သူ့ ကောင်စီ၏အစီရင်စာအရ နိုင်ငြံ…
ရခိုင်ပြည်နယ်နှင့် ရိုဟင်ဂျာ လူ့အဖွဲ့အစည်း by အာမန…
Rohingya History read by clicking Link
Racism to Rohingya in Burma by Dr. Abid Bahar in r…
Browse › Home › မြန်မာ့သတင်း » ၂၀၁၄ မြန်မာတစ်နိုင်ငံလုံး သန်းခေါင်စာရင်း ကောက်ယူမှုတွင် ရိုဟင်ဂျာ ပါမည်မဟုတ်
၂၀၁၄ မြန်မာတစ်နိုင်ငံလုံး သန်းခေါင်စာရင်းကောက်ယူမှုတွင် ရိုဟင်ဂျာ ပါမည်မဟုတ်ဟု လ၀က ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးခင်ရီ က ယနေ့ နိုင် ငံခြားရေး ၀န်ကြီးရုံးဟောင်းတွင် ရခိုင်အရေးနှင့် ပတ်သက်၍ သတင်းစာ ရှင်းလင်းပွဲ တွင် ပြောကြားခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ ထို့ အပြင် ဘင်္ဂလားဒေရှ် သံ အမတ်ကြီး၏ “ရိုးဟင်ဂျာများမှာ မြန်မာတိုင်းရင်းသား ၁၃၅ မျိုးတွင် ပါဝင်ခြင်းရှိမရှိ “ ဟူသော အမေးကိုလည်း ၄င်းက ရိုဟင်ဂျာများမှာ ပထမ အင်္ဂလိပ်ကျူးကျော် စစ်ပြီးနောက်ပိုင်းမှ မြန်မာနိုင်ငံသို့ရောက်ရှိလာခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီး မြန်မာတိုင်းရင်းသား မဟုတ်ကြောင်း တရားဝင်ငြင်းဆို လိုက်သည်။Popular Myanmar News Journal
မြန်မာနိုင်ငံက တိုင်းရင်းသား (၁၃၅) မျိုးထဲမှာ ရိုဟင်ဂျာဟာ ဘယ်တုန်းကမှ မပါဝင်ခဲ့ဘူးသလို မြန်မာနိုင်ငံမှာ ရိုဟင်ဂျာလူမျိုး ဆိုတာလည်း မရှိဘူးလို့ လူဝင် မှု ကြီးကြပ်ရေးနဲ့ ပြည်သူအင်အား ၀န်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စု ၀န်ကြီး ဦးခင်ရီက ဒီကနေ့ ပြောကြားလိုက်ပါတယ်။
၂၀၁၂ ခုနှစ် ဇူလိုင်လ ၃၀ ရက်က ရန်ကုန်မြို့ နိုင်ငံခြားရေး ၀န်ကြီးဌာန အဆောက်အဦးဟောင်းတွင် ကျင်းပသည့် ရခိုင်ဒေသ အရေးနှင့် ပတ်သက် သည့် သတင်းစာ ရှင်းလင်းပွဲ ပြုလုပ်နေစဉ်။
ရိုဟင်ဂျာဟာ မြန်မာတိုင်းရင်းသား လူမျိုးမဟုတ်ဘူးဆိုတာ သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်လည်း အခိုင်အမာ ပြောဆို ထားပြီး ဖြစ်တယ်လို့ ဦးခင်ရီက ပြောပါ တယ်။ ပထမ အင်္ဂလိပ်-မြန်မာစစ်ပွဲ ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ ၁၈၂၄ ခုနှစ် နောက်ပိုင်း ရခိုင်ဒေသဟာ အင်္ဂလိပ် ကိုလိုနီဘ၀ လက်အောက် ကို ရောက်ရှိသွားပြီး လယ်ယာလုပ်သား လိုအပ်ချက် ကို ဖြည့်တင်းနိုင်ဖို့ တဖက်နိုင်ငံကနေ ဘင်္ဂါလီ လူမျိုးတွေကို ခေါ်ယူခဲ့ရခြင်း သာ ဖြစ် တယ်လို့လည်း ဦးခင်ရီက ပြောပါတယ်။
ရခိုင်ပြည်နယ်မှာ ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ ပဋိပက္ခတွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး မြန်မာနိုင်ငံ ဆိုင်ရာ ကုလသမဂ္ဂ လူ့အခွင့်အရေး ကိုယ်စား လှယ် မစ္စတာ ကင်တားနား နဲ့ ပြည်ထောင်စု ၀န်ကြီး ငါးဦးတို့ ဒီကနေ့ နေ့လည်ပိုင်းက ရန်ကုန်မြို့မှာ တွေ့ဆုံပြီး သတင်းစာ ရှင်းလင်းပွဲတစ်ရပ် ကျင်းပခဲ့ပါတယ်။
အဆိုပါ အရေးအခင်းတွေမှာ ပါဝင်ပတ်သက်မှုအတွက် အစိုးရမဟုတ်သော နိုင်ငံတကာ အဖွဲ့အစည်း (INGO) များမှ ၀န်ထမ်း ၁၀ ဦးကို ဖမ်းဆီး အရေးယူခဲ့ပြီး တစ်ဦးကို စစ်ဆေးပြီးနောက် ပြန်လည် လွှတ်ပေးလိုက်ကြောင်း၊ ပဋိပက္ခတွင် ပါဝင် ပတ်သက်၍ ဖမ်းဆီးခံရသော INGO များမှာ UNHCR မှ ငါးဦး၊ AZG မှတစ်ဦးနှင့် WFP မှတစ်ဦးတို့ ဖြစ်ကြောင်း AZG မှဝန်ထမ်းကို ဖမ်းဆီး စစ်ဆေးပြီးနောက် ပြန်လွှတ်ပေး လိုက်ပြီ ဖြစ်ကြောင်းလည်း ပြောပါတယ်။
ရခိုင်ပြည်နယ်တွင် ပဋိပက္ခများတွင် INGO များမှ တချို့ပါဝင်ပတ်သက်မှုများ ရှိခြင်းကြောင့် ဖမ်းဆီးမှုများ ရှိသည်ဟု သတင်းများ ထွက်ပေါ်ခဲ့သော် လည်း အစိုးရက ယခုသတင်းစာ ရှင်းလင်းပွဲတွင်မှ တရားဝင် ထုတ်ဖော် ပြောကြား ခဲ့ခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။
ပါကစ္စတန် အခြေစိုက် တာလီဘန်အဖွဲ့က မြန်မာနိုင်ငံကို ခြိမ်းခြောက်ခဲ့မှုများ ပြည်ပ မီဒီယာများတွင် ဖော်ပြ ခဲ့ပြီး ပြည်သူ များက စိုးရိမ် ပူပန်မှုများ ရှိနေတာကြောင့် နယ်စပ်နှင့် ပြည်တွင်း လုံခြုံရေးနှင့် ပတ်သက်၍ နယ်စပ်ရေး ရာနှင့် မြန်မာ့စက်မှု ဖွံ့ဖြိုးရေး ၀န်ကြီးဌာန ၀န်ကြီး ဒုတိယ ဗိုလ်ချုပ်ကြီး သိန်းဌေးကို မေးမြန်းရာ “လုံခြုံရေး အပြည့်အ၀ ရှိပါတယ်”ဟု ဖြေကြားကြောင်းလည်း သိရပါတယ်။
ဒီနေ့ပြုလုပ်တဲ့ သတင်းစာ ရှင်းလင်းပွဲကို ပြည်ထောင်စု ဝန်ကြီး ဦးခင်ရီနဲ့ အတူ နယ်စပ်ရေးရာ ဝန်ကြီး ဒုတိယ ဗိုလ်ချုပ်ကြီး သိန်းဌေး၊ လူမှုဝန်ထမ်း ကယ်ဆယ်ရေးနဲ့ ပြန်လည် နေရာချထားရေး ဝန်ကြီး ဦးအောင်ကြည်၊ နိုင်ငံခြားရေး ဝန်ကြီး ဦးဝဏ္ဏမောင်လွင်တို့ တက်ရောက်ခဲ့ပြီး မြန်မာနိုင်ငံ အခြေစိုက် ကုလသမဂ္ဂ အဖွဲ့အစည်းများ၊ နိုင်ငံတကာ သံရုံးများမှ တာဝန်ရှိသူများလည်း တက်ရောက်ခဲ့ကြပါတယ်။RFA Burmese
← ရိုဟင်ဂျာကိစ္စ ဖြေရှင်းပြီးမှ ရွေးကောက်ပွဲစနစ်သစ် စဉ်းစားသင့်ဟု ရခိုင်ပါတီဆို
အမှန်ကို ချစ်ပါ- (၂) | ဌေးလွင်ဦး →
2 comments on “၂၀၁၄ သန်းခေါင်စာရင်းကောက်ယူရာ တွင် ရိုဟင်ဂျာ မ ပါ ဆိုသော လ၀က ၀န်ကြီး ဦးခင်ရီ ၏ဖြေ ကြား ချက် ကို ပြန် လည် ရှင်း လင်း တင် ပြ ခြင်း ….”
ပြည်ပဖိအားမပါဘဲရိုဟင်ဂျာကိစ္စမပြေလည်နိုင်၊ ပြည်တွင်း၌အာဏာစက်အောက်တွင်ခိုင်းသည့် အတိုင်း� July 31, 2012 at 4:19 am	Reply
[…] ၂၀၁၄ သန်းခေါင်စာရင်းကောက်ယူရာတွင်ရ… […]